Ruushka Ruush ah ee ugu Wanaagsan Dunida? - Jawaab Ku Saabsan
Julia Vashneva, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare ee Macaamilka Guud, wuxuu aad uga walaacsan yahay in spam ramadu hadda ay noqdeen dhibaato weyn oo ka mid ah noocyada ugu xun ee spamka ee internetka. Maadooyinka iyo maqaallada loo diro qadkaaga ku jira khariidadaha asaasiga ah ee ku saabsan fayraska khatarta ah ee caqabad ku noqon kara shabakadaha iyo shabakadaha ISP si aad u badan. Waxa kale oo ay ammaan tahay in la yiraahdo tani waxay qaadan doontaa macluumaad badan, khayraad iyo waqti.
Sida dalalka kale, Ruushka ayaa dhawaan qaaday tallaabooyin muhiim ah oo looga hortagayo weerarrada viral iyo spam - windows vps hosting services. Inkasta oo dhammaan tallaabooyinkaas, dadka isticmaala adduunka oo dhan ayaa wali helaya emailada spamka oo ka yimid Ruushka. Sidaa awgeed, waxaan dhihi karnaa in aysan suurtagal ahayn in lagu soo saaro emails guud ahaan. SpamCop.net waxay soo bandhigtay xeelado dhowr ah si ay u waxyeeleeyaan aqoonsiyada emailka ee dad badan oo isticmaala. Maxay suurtogal u tahay in la xakameeyo? Sababta ugu weyn waa in la'aanta DNS liiska blacklisting. Ma jiro nidaam la isku hayo oo lagu xakameynayo spam network, xitaa filtarradu ma saamixi karto spam Ruushka ah sababtoo ah tallaabooyinka nabadgelyada oo aan ku filneyn.
Founder of spam Ruush:
Vardan Kushnir ayaa la sheegay in uu ka danbeeyay spam Ruush ah. Waxa uu ahaa injineernimo caan ah oo laga yaabo in uu mustaqbalku horumariyo. Nasiib darro, ninkan wuxuu soo qaaday waddo khalad ah waxaana uu internetka ka buuxiyay spam burbur iyo xaasidnimo leh. Kadib markii uu la dagaallamayay xukuumaddiisa sababo siyaasadeed, Kushnir waxay qaadatay waddo kale waxayna bilaabeen isticmaalka hubkiisa - spam. Waxa uu isticmaalay isticmaalka habboon ee ololeyaal email iyo iibiyey saamiyada Sophim..Mid ka mid ah oo joojiyay wiilkan xun ee ka dambeeyay inuu ku guulaysto wuxuu ahaa gobolka Kansas oo dalbaday caddaynaya macaamilada. Sidoo kale, ninkaas ayaa la aaminsan yahay in uu ka danbeeyay hawlaha spam ee Ruushka oo diiradda saarayay hanjabaadaha siyaasadda iyo bulshada.
Qaar ka mid ah asxaabtiisu waxay ku andacoodaan in Kunshir marwalba rabto inuu noqdo horumariye sare oo software, sida Bill Gates. Laakiin wuxuu doortay waddo kale oo aan helin guul. Fikrado faan badan iyo fara badan oo badani waxay u horseedeen inuu cabsi ka muujiyo dalkiisa, taasoo keentay dhibaatooyin badan iyo xitaa dil.
Ruushka Ruush maanta:
Kunshir ayaa ka soo tagay rikoodhada weligeed ah oo ku saabsan spamka maalmahan. Farriimaha Faransiiska ee kala duwan ayaa ka hadlaya hababka gaarka ah iyo kuwa cusub. Qaar ka mid ah waxay bixiyaan alaab iyo adeegyo qiimo jaban, halka kuwo kale ay ku lug leeyihiin ganacsiga qaldan iyo khamaarka internetka. Mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee spam waa xayaysiinta saacadaha Rolex been ah.
Inkastoo isticmaalayaasha qaarkood aysan maqlin sababtoo ah fariimaha ay helayaan laguma turjumi karo Ingiriisi, kuwa kale waxay ka welwelsan yihiin mustaqbalka maaddaama sanduuqa sanduuqyada ay buuxsamaan emails badan. Halkan waxaa ah sida loo xiro emaillada ay ku qoran yihiin luuqadaha shisheeye:
1. Waxaad abuuri kartaa xiriiro gaar ah oo loogu talagalay emailka la keydiyay
2. Waa inaad tirtirtaa emaylka la tuuray, la keydiyay ama ku jira faylasha.
3. Waa inaad u wareejisaa galka qashinka oo isla markaaba tirtirto.
Haddii aad heshay emails badan, waxaad xadidi kartaa lambarkooda oo aad u diri kartaa inta ka hartay faylka spam.